Fenoarivo : zandary maty novonoina 10 lahy, lasan’ireo ny basiny | NewsMada
Fenoarivo : zandary maty novonoina 10 lahy, lasan’ireo ny basiny
Vao manomboka ny taona. Zandary iray indray maty novonoin’ny jiolahy tany Fenoarivo Ambatofinandrahana. Tsatoka antsy telo nahafaty azy, very ny basiny.
Zandary iray C2C no maty novonoin’olona tany Fenoarivo distrikan’Ambatofinandrahana, afakomaly antoandro, tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany. Araka ny vaovao avy amin’ny zandarimaria, telo lahy ireo zandary no nanao fisafoana ny tsena tany an-toerana tamin’io afakomaly io.
Raha ilay zandary iray hamonjy ny birao iny no notafihina 10 lahy raha vao nandalo tamin’ny toerana hoe Atsimon-tsena. Somary takotakona izy io, ka avy dia notolomin’izy ireo ilay zandary iray. Tsy vitan’izay fa mbola notsindronin’ireo ny antsy ilay zandary ka lavo tamin’ny tany. Nalain’ireo olona ireo ny basiny ary nentin-dry zareo nitsoaka. Nisy mpiantsena nandalo nahatsikaritra izany ka niantso vonjy. Namonjy azy avy hatrany ny fokonolona sy ny zandary namany ary niezaka nanara-dia ireo jiolahy ka raikitra ny fifampitifirana. Jiolahy roa no tratra tamin’izany, ary maty kosa ilay zandary izay nisy tsatoka antsy telo tao amin’ny hatony. Tsy hita kosa ny basy, izay mety nentin’ireo jiolahy hafa nitsoaka.
Araka ny fanazavana, Tsarazara Delor Bruel, 25 taona ity zandary maty ity, manambady ary manan-janaka iray. Efa niala tany Fenoarivo Ambatofinandrahana omaly ny razana ary hoentina halevina any Fenoarivo Atsinanana.
Zandary iray sahady maty
Vao manomboka ity ny taona, zandary iray sahady maty novonoin’ny jiolahy. Ny taon-dasa teo, nahatratra 17 ny isan’ny dahalo maty am-perinasa. Heverina fa tsy hipetra-potsiny ry zareo tompon’andraikitra manoloana ity tranga tany Fenoarivo ity. Efa niteny rahateo izy ireo fa tsy hamela mahazo izay mamono zandary. Tamin’ity, jiolahy namono ilay zandary tao amin’ny tsenan’i Fenoarivo. Fantatra fa efa am-perinasa manao ny famotorana ny zandary any an-toerana, ary efa nampiana ny isan’izy ireo.